Fanitsiana ny varotra sy ny varotra: vinavina be ho an'ny ho avy | Martech Zone
Vao haingana izahay no nanana mahafinaritra tafatafa niarahana tamin'i Giles House ary iray amin'ireo lohahevitra niadian-kevitra ny varotra sy varotra marketing. Vaovao farany tamin'io tafatafa io, InsideView vao tsy ela akory izay dia namoaka ireo faminaniana ireo momba ny fampifanarahana amin'ny varotra sy ny varotra. Miorina amin'ny boky vaovao izy ireo, Natao hahatratrarana: Ahoana ny fomba fampiraisana ny ekipa mpivarotra sy marketing anao ho hery tokana ho an'ny fitomboana, nosoratan'i InsideView's CMO Tracy Eiler, ary VP an'ny Enterprise Sales Andrea Austin.
Ireo vinavina dia niainga tamin'ny valin'ny fanadihadiana 1,000 mpitarika ny varotra sy ny marketing. Ny fikarohana nataon'i Eiler sy Austin dia mampiseho fa mitombo hatrany ny olan'ny tsy fanarahan-dalàna ary misy fiantraikany mivantana amin'ny fidiram-bola ny fanapahana.
Ny fampiroboroboana ny varotra sy ny varotra dia olan'ny bokotra mafana ifantohan'ny orinasa amin'ny fanamboarana indray mandeha. Tsy ny hitazomana ny varotra sy ny marketing tsy ho eo an-tenda; izany dia satria ny fampifanarahana dia midika hoe fidiram-bola sy fitomboana haingana. Ka inona no ho avy eo? Taorian'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny namana amam-bolana, dia naminavina ny toerana hieritreretana ny fandehanana izahay mba hahafahan'ny orinasa mandroso. Tracy Eiler, CMO an'ny InsideView
Manolotra ireto faminaniana fito manaraka ireto ny mpanoratra ho an'ny hoavin'ny varotra sy ny fampifanarahana amin'ny varotra satria mahatsapa ny tombony azo avy amin'ny fampifanarahana ny varotra sy ny varotra ny orinasa ary miomana hampitombo ny ezaka fampifanarahana amin'ny 2017:
Ny fiakaran'ny mpivarotra consultative. Ireo mpivarotra mahomby indrindra dia ho lasa mpivaro-tena. Amin'ny taona 2020, ny filan'ny mpivarotra B2B dia hiova hangataka "mpivarotra consultative" bebe kokoa, hoy ny Forrester Research. Ny mpikaroka dia manao fikarohana bebe kokoa ary tsy mila mpivarotra mifototra amin'ny fifanakalozana intsony, noho izany ny maodelin'ny varotra nentim-paharazana dia tokony hanitsy. Ireo mpivarotra consultative vaovao ireo dia ho lasa manam-pahaizana manokana amin'ny indostria, ny vokatra, ny personasiona mpividy ary ny dia ataon'ireo mpanjifa ary mila ny fampandehanana ara-barotra eny an-dalana. Indostria sasany aza dia hanomboka hanambatra ny varotra sy ny marketing amin'ny ekipa iray ihany.
Ho lasa tsy maintsy ilaina ny fampiofanana miampita. Ny mpiasa tena tadiavina dia ireo izay mitady traikefa mihoatra ny fari-pahaizany, ao anatin'izany ireo mpivarotra mahatakatra ny marketing sy ny mpivarotra manana fiaviana varotra. Ireo orinasa mandroso aza dia hanao endrika ara-dalàna sy mandrisika ny fiofanana miampita amin'ny toeram-piasana.
Ny fantsona dia ho lasa fomba voalohany handrefesana ny fahombiazan'ny marketing.Araka ny fikarohana nataon'ny InsideView, 66 isan-jaton'ny mpivarotra no milaza fa ny fantsom-panafody no fomba voalohany refesina. Ireo orinasa mandroso dia hanomboka hijery ny fidiram-bolan'ny ekipa, izay ny ampaham-bola isam-bolana dia ho andraikitry ny marketing. Ny marketing dia voatosika hiasa amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny repoblika tsirairay mba hahafahany manisa ny fiantraikany mivantana amin'ny quota-n'ny rep.
Ny dian'ny mpanjifa iray manontolo dia ho lasa centric-centric. Ny hetsika ABM dia manohy mandresy ny fampiasam-bola amin'ny marketing hafa, mamorona modely iray hahombiazana izay tsy ho ferana amin'ny varotra sy marketing ihany amin'ny ho avy. Miomàna ho an'ny orinasa hanao laharam-pahamehana ny kaonty ny zava-drehetra.
Lasa zava-dehibe kokoa ny paikadin'ny data ho an'ny mpanjifa. Ny fikarohana momba ny indostria dia mampiseho fa ireo orinasa mametraka ny angon-drakitra eo afovoan'ny fanapaha-kevitra momba ny varotra sy ny varotra dia manatsara ny ROI marketing hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 20% (Winterberry Group). Mba hitrandrahana amin'ny tontolon'ny varotra sy ny varotra, ny orinasa mahomby dia hanao laharam-pahamehana ny ezaka handaminana sy hanamafisana ny fotodrafitrasa sy ny paikadin'ny data ho an'ny mpanjifa. Ny fanaovana izany dia hahafahan'ny orinasa mampivelatra ny faharanitan-tsoratry ny mpanjifa iraisana izay ahafahan'izy ireo mampifanaraka stratejika bebe kokoa.
Misy fiantraikany lehibe ny millennial. Tamin'ny taona 2016, ireo Millennial dia nihoatra ny Baby Boomers ho taranaka velona lehibe indrindra eto amin'ny firenena. Midika koa izany fa manova ny endrika makiazy sy ny fahaiza-manaon'ny mpivarotra izy ireo. Millennial dia mpandraharaha, adaptive ary miara-miasa bebe kokoa. Manana fanantenana samihafa amin'ny fanabeazana, ny fifandraisana ary ny fandrosoana amin'ny asa koa izy ireo. Ireo orinasa mahomby dia hanomboka hampifanaraka ny fomba fandaminany mba hisarihana sy hitazonana ny talenta tsara indrindra amin'ity taranaka ity, ary handinika raha vonona handray fampiroboroboana ho isan'ny fizotran'ny karama ny kandida. Ary ny arivo taona ankehitriny dia mpividy rahampitso. Ny orinasa dia tokony hifanaraka amin'ny fombany.
Tonga ny akademia. Ireo oniversite dia hijery ireo programa B2B ofisialy ho ilaina amin'ny fanomanana ireo mpianatra amin'ny tontolo tena izy, eo amin'ny lafiny varotra, marketing ary data. Manantena ny hahita anjerimanontolo bebe kokoa manolotra diplaoma amin'ny varotra fa tsy marketing sy kaonty fotsiny. Ary koa, andrim-panjakana misimisy kokoa no hanavao ny diplaoman'ny marketing mihoatra ny marketing an'ny mpanjifa mba hifantoka amin'ny B2B. Farany, manantenà diplaoma mifantoka amin'ny orinasa bebe kokoa amin'ny siansa sy angona angona Analytics satria lasa manakiana kokoa ny fahombiazan'ny orinasa ny angona.
Ity ny infographic, Faminaniana 5 ambony momba ny ho avin'ny fampifanarahana amin'ny varotra sy ny varotra:
Momba ny InsideView
InsideView dia manome hery ny resaka raharaham-barotra manerantany, manampy ireo orinasa maherin'ny 20,000 XNUMX hamaritra ny paikadiny amin'ny tsena manomboka amin'ny volavolan-dalàna mankany amin'ny tanjona kendrena kokoa. Ny fitarihana fitsikilovana tsena Ny sehatra dia manampy ny ekipa mpivarotra sy ny varotra hamantatra haingana sy hahafeno ireo tanjona kendrena tsara indrindra, hifandray amin'ny fifampiraharahana bebe kokoa, hanakatona fifanarahana bebe kokoa ary hitazona sy hanitatra kaonty. InsideView no orinasa tokana manomboka amin'ny orinasa marina indrindra ao amin'ny indostria ary mifandraika amin'ny angon-drakitra ary manatsara azy amin'ny fomba fijery ara-barotra tena izy sy fifandraisana marina.
Tags: marketing miorina amin'ny kaontyvarotra consultativefivarotana consultativeCRMcross-fiofananaangona ho an'ny mpanjifafampifanarahana amin'ny marketingfampisehoana marketingfantsonafampifanarahana amin'ny varotravarotra sy marketingvarotra sy varotra marketingfahombiazan'ny varotra
Google Optimize fandefasana ho an'ny mpivarotra ho fizahan-toetra